5 Zvishoma Akazara Nevanhu Cities Yekudzidza In France | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba France > 5 Zvishoma Akazara Nevanhu Cities Yekudzidza In France
France munhu akakurumbira vashanyire hotspot nekuvongwa maguta ayo akanaka uye mukurumbira varipo. Nyika iri kurota kuenda yakakurumbira pasi pose nokuda kwayo incredible tsika uye zvinonaka chikafu. Nepo vashanyi vakawanda anodirana kuna Paris, kazhinji guta anogona kuva rakawandisa chaizvo, kunyanya mu chirimo. Luckily, France ane saka zvakawanda kupa pane chete Paris uye isu kuongorora shanu zvishoma ungana maguta pazasi.
Reims ndiro guta uye Champagne ndiye waini nharaunda uye vose zvachose naka. It dzimba vamwe vakawanda yemizambiringa mbiri munyika uye Vafambi chokwadi kunakidzwa ayo wakagadzikana chadenga. Kana uri Champagne feni, kubhadhara kushanya kunotodiwa. Nharaunda iri kusimba akanaka asi ndoda ungana pane nyika guru. Unenge muna Champagne, kuva nechokwadi kutora kutungamirirwa dura kushanya uye kudzidza zvakawanda nezvekuti shambeini anoitwa.
Metz kuna Reims Zvitima
Luxembourg kuna Reims Zvitima
Lyon kuna Reims Zvitima
Lyon chinhu rugare kwete chete zororo rwendo uyewo UNESCO World Heritage Site nokuda kwayo matongo Roman yakakurumbira uye dzinokatyamadza mamiziyamu. Kana uri Foodie, Lyon ari mumwe yakanakisisa nzvimbo kunakirwa mamwe richinaka zvinonaka muFrance, kunyange kuva nechokwadi kutsvaka mazano pamusoro kugara utano ndichiedza zvokudya zvitsva kunze.
Wevanoda akitekicha, Lyon zvakare imba ku machechi mazhinji eRenaissance kuti uchawana vakapararira zvose pamusoro guta.
London kuenda kuLyon Highspeed Zvitima
Amsterdam kuna Lyon Zvitima
Kana uchida zvinonhuhwira, Grassé ndekwaunogumira wakakwana iwe. Kamwe chawakava nacho wakagadzikana kwayo, dekara migwagwa, uchawana wava kuda kudzokera zvakare uye zvakare. Grassé iri nzvimbo yakanaka riri pedyo French riviéra uye, nzira yakanakisisa kufadza veko heino kudzidzira chiFrench chako!!
Inozivikanwa nekuve rechipiri pakukura guta muFrance, Marseille iguta ane anoyevedza romumhenderekedzo yegungwa ekunze. Pano uchawana paakaita matongo uye zvinoshamisa unyanzvi nzvimbo kukusiyai kuvaraidzwa kwemaawa. Nokuti vanotsvaka kutandara, Marseille musha hunoshamisa mahombekombe apo unogona kunogeza gungwa inofadza. Marseille inopa yakanakisisa zvose nyika sezvazvakanyorwa izere zvetsika zvinhu uyewo akanyorova nzvimbo kuzorora mukati.
Kazhinji vaiona rimwe remaguta romuFrance zvikuru underrated, Lille iduku vakawandisa pane vamwe vakawanda French dzakasiyana asi zvakafanana akanaka. vashanyi anogona kufamba kuburikidza ichitenderera Lanes uye kunakidzwa mavara mapurani uye rine bishi chadenga munzira. For evanofarira, ari Muzinda Arts Akanaka miziyamu inofanirwa-kushanyira nzvimbo sezvo iri imba yeFrance yechipiri pakukura muunganidzwa.
Paaishanyira kana achishanyira mishoni France kuva nechokwadi arege kurasikirwa chero pamusoro maguta! Sezvo vari zvishoma ungana, uchifamba vakavapoteredza achava dikita uye uchakwanisa kunakidzwa nevamwe unhu guta rimwe nerimwe. Chimwe chinhu maguta aya ose zvakafanana ndiyo nzvimbo dzokuona dzakanaka uye – ehe saizvozvo – zvinoshamisa chikafu, uye pashure usakangamwa, muEurope vanhu kudzidzisa okufamba Save A Train.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-less-crowded-cities-to-explore-in-france%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)